🥇Ezona ziBrokhwe ziLawulweyo zeFCA zikaJanuwari 2022 | Funda isiKhokelo soRhwebo esi-2
Ukuhlaziywa: 2 Disemba 2021 Inyaniso ihlolwe
Esi sicatshulwa sijongiwe ukuba sibonisa olona lwazi luhlaziyiweyo ngexesha lokubhalwa.
Amathuba ukuba uvile ngeGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Kodwa, ukuba awunayo, i-FCA liqumrhu elizimeleyo elilawula ngokukuko iifemu zabarhwebi base-60,000 base-UK.
Ngaphandle kweCAA, ngekhe sibenayo le ngubo yokhuselo kubusela besazisi, ukuxhaphaza imali kunye nenkxaso mali yabanqolobi. Ngokusebenzisa kuphela i-FCA elawulwa ngabarhwebi, awukhuseli imali yakho kuphela kodwa kunye nenkcukacha zakho.
Namhlanje siza kutyhila abarhwebi abalawulwa kakhulu be-FCA kwindawo yorhwebo yase-UK. Ukulinganisa iifemu zethu zabarhwebi abaphezulu, sijonga indlela iqonga elinokusebenziseka ngayo kwaye luhlobo luni lwezixhobo zezezimali ezibonelelwa sisiza. Ukongeza kuloo nto, siza kuphonononga iindlela ezibalulekileyo ezinje ngenkampani, iifizi ezifanelekileyo kunye nokwahluka kweeasethi.
I-FCA iqale ukumiliselwa nge-1 ka-Epreli 2013, ukuze uxolelwe ngokucinga ukuba yinto entsha. Nangona kunjalo, inyani kukuba i-FCAs echaseneyo neGunya leeNkonzo zezeMali (FSA) yayingumlawuli oyintloko wase-UK kwicandelo lezemali iminyaka emininzi.
Kuze kube yilapho i-FSA yahlulahlulwa yaba ngamagunya amabini ahlukeneyo; I-FCA kunye neGunya lokuLawula ubuNgcali (PRA). Elokugqibela liqumrhu elongamele ukongamela nokumisela imibutho yabasebenzi ngetyala, iibhanki, iinshurensi kunye nemibutho yokwakha njl.
I-FCA liqumrhu loluntu ngoku elinikwe uxanduva lokujonga indlela yokuziphatha kwezemali e-UK. Ekuqhubekeni kwe-FSA yahlulwahlulwa, uMthetho weeNkonzo zezeMali neMarike wenziwa izilungiso. Umthetho weeNkonzo zeMali ka-2000 wenze iinguqu ezinkulu, ngakumbi xa kufikwa kwindlela icandelo lezemali elilawulwa ngayo ngoku.
Kukholelwa ukuba eyona ngxaki inkulu yezemali ngowama-2008 nowama-2009 idlale indima enkulu kuphononongo lwendawo yezemali nendlela olwalulawulwa kwaye lukhuselwe ngayo. Eyona njongo iphambili ye-FCA kwasekuqaleni ibikukwenza ishishini lezemali kunye nokuthengisa libe yindawo ekhuselekileyo. Oku kuthetha ukuba iimarike ezifanelekileyo nezingafihliyo kuye wonke umntu - hayi ukuba kunjalo okanye ii-buts.
Kule mihla iimarike kunye noqoqosho ngekhe zisebenze ngokufanayo ngaphandle kweCA. Umzimba awomeleli kuphela ukuthembeka kweemarike zezemali kwaye ukhusela abathengi, kodwa ukwakhuthaza ukhuphiswano kolu shishino.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ihlangatyezwe ngabarhwebi ukuze yamkelwe yi-FCA?
I-FCA ayenzi kubelula kubarhwebi, kuba ukufumana iphepha-mvume kuthatha iinyanga neenyanga zophicotho-zincwadi kunye nokutsiba iihupula ukufezekisa imigangatho yomzimba. Ukuze umrhwebi afumane iphepha-mvume le-FCA, kufuneka babonise ukuba bayayithobela imithetho yomgaqo kunye neekhowudi zokusebenza. Ngaphezulu koko, kufuneka basebenze ngokupheleleyo ngaphakathi komthetho wase-UK.
Ezi ziindaba ezimnandi kubatyali mali, kuba oko kuthetha ukuba umrhwebi ubanjelwe uxanduva kwaye ulandela imigaqo engqongqo. Uya kubona apha ngezantsi uluhlu lweemfuno, zonke ekufuneka zithotyelwe nguye nawuphi na umrhwebi ngaphambi kokuba iphepha-mvume linikezelwe:
Ayikho imfihlo yokuba amandla aphezulu angakhokelela kwityala ukuba abarhwebi abalumkanga. Ngapha koko, ukuba ukuxhatshazwa kungakhokelela kwilahleko enkulu. Ukuphendula abanye abathengisi be-intanethi abakwi-Intanethi ababonelela ngemilinganiselo ephezulu yokuhlanya (umzekelo 1: 1000), iFCA yazisa imida kubathengi abathengisayo. Oku kuthetha nje ukuba 'uMndilili kaJoe' utyalomali ongaveli kwimvelaphi yobungcali okanye yeziko.
Umzekelo, abarhwebi be-CDF abathengisayo banqunyelwe ekunikezeleni ngamandla phakathi kwe-1: 2 kunye ne-1: 30. Masithi isikhundla somrhwebi sehla saya ngaphantsi kwe-50% yemali efunekayo ukugcina indawo yabo ivulekile (ngokweakhawunti yeCFD). Kule meko, inkampani yomrhwebi kufuneka ivale indawo yomthengi kwangoko.
Ukuchithwa kwemali ngokuchasene nemali (AML)
Nokuba umrhwebi ubhalisela phi iakhawunti, bonke abathengisi be-FCA kufuneka babenakho ukufumanisa wonke umtyali mali osayina eqongeni. Esi sizathu sokuba ungakwazi ukubhalisela ukurhweba ngokuthengisa ngaphandle kokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuchonga.
Injongo yomgaqo-nkqubo we-AML kukwamkela kunye nokugqithisa nakweyiphi na imisebenzi yezemali ekrokrisayo. Oku kubandakanya inkxaso-mali yabanqolobi, ukuxhaphaza imali, ukusetyenziswa kokhuseleko kunye nobuqhetseba beemarike. Abarhwebi kulindeleke ngokusemthethweni ukuba bahambisane nemigaqo-nkqubo esekwe kumngcipheko kunye nokujonga abathengi.
Ngombono wokujongana neemfuno zabaxumi, kufuneka babonakalise ukuqonda kokukhathalelwa kwabathengi kunye nokubaluleka kokuguqula 'iprofayili yomngcipheko wabathengi'. Umrhwebi ngamnye we-FCA kufuneka aqwalasele kwaye achonge naziphi na iinkqubo ezikrokrisayo kwaye adlulisele olo lwazi emzimbeni.
Sitshilo ukuba abathengisi kufuneka batsibe kwihupu ukuze bavunyelwe yi-FCA-ke enye yezinto ezininzi ezifunekayo kuphicotho zincwadi lonyaka.
Umrhwebi ochaphazelekayo kufuneka azise i-FCA ngazo zonke ii-asethi kunye nemali eziyigcinileyo. Ngokomthetho 'weeNkampani', iqonga kufuneka liqeshe umphicothi zincwadi osemthethweni ukwenza ingxelo yonyaka ngolu hlobo. Iingxelo zophicotho-zincwadi ze-CASS nazo kufuneka zingeniswe kwi-FCA.
Isimo solawulo sitshintshile kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye ii-brokers ngoku ziphendula kakhulu kunangaphambili ukuthobela umthetho. Kwakhona, ezi ziindaba ezilungileyo kuphela kuwe njengomrhwebi!
Abarhwebi abalawulwa yi-FCA kufuneka baxele ngokupheleleyo yonke imirhumo ehlawulwa ngokucacileyo nangokungafihlisiyo. Oku kubandakanya 'isaziso solwazi' esichaza ukuba njani kwaye nini imali eza kuhlawulwa kubarhwebi- ngakumbi xa kuziwa kwiiasethi zeCFD.
Okulandelayo, 'sinesiqinisekiso somthengi'. Le yifom ekufuneka igcwaliswe ngabathengi ukuqinisekisa ukuba baxelelwe kwaye bayasiqonda 'isaziso' esasikhankanyiwe ngaphambili.
Ukukhuthala ngenxa yokuba kubalulekile kubathengi abalawulwa yi-FCA. Oku kubandakanya ukujongwa kwangasemva kweenkampani zomntu wesithathu kunye nokujonga inkqubo-sikhokelo yokuthobela inkampani. Abarhwebi abalawulwa yi-FCA bahlala bethathelwa ingqalelo, kwaye zonke iirekhodi zemali kufuneka zivavanywe ngumzimba.
Masithi umzekelo ukuba umthengi ubonakala ngathi utyala imali ngokungaqhelekanga. Kule meko, kwaye ngaphandle kokukhetha, umrhwebi uyafuneka ngokusemthethweni ukuba avelise ingxelo ephuculweyo yenkuthalo. Umrhwebi ngamnye we-FCA unyanzelekile ukuba afumane ubungqina bokuba ifunyenwe phi imali.
Nayiphi na inkampani yomrhwebi kufuneka yahlulele ngokusemthethweni imali yabathengi kuyo nayiphi na iakhawunti egameni lenkampani. Lo mthetho uwusebenzisayo ukukhusela imali yakho xa kukho nasiphi na isenzo esingekho mthethweni, okanye urhwebo lwentengiso luphuma kwishishini.
Loluphi ukhuseleko olunikezelwa yiCAA?
Njengoko sigubungele, i-FCA ibonelela ngokhuseleko lwemigangatho eyahlukeneyo kuluntu lokurhweba kwaye ilawula abathengisi abakwi-Intanethi ngenqindi lesinyithi. Iqonga ngalinye lezorhwebo le-FCA kufuneka lihlangane nemigangatho yemarike yezemali ebekwe ngulo mzimba kwaye unokulindela ukuphicothwa rhoqo kunye nokuvavanywa.
Ngenxa yoKhuselo lweNgxowa-mali, imali yakho iya kukhuselwa ukuya kuthi ga kwi-85,000 ye- 'Financial Services Compensation Scheme' (FSCS). Ukongeza, iIi-asethi zabathengi ziya kuthathelwa ingqalelo ngokhuseleko lokwahlula imali. Eli nyathelo ligcina ikapitali yakho ikhuselekile nakuphi na ukungalunganga okuvela kwiqonga lomthengisi, kunye nalo naliphi na ityala lenkampani elinxulumene nelo qonga.
'Imali eyahluliweyo' ngamanye amaxesha iyakhathalelwa ngumrhwebi ophakathi, oya kuba noxanduva lokukubuyisela imali yakho kwimeko yeqonga labarhwebi elingaphandle kweshishini.
Zeziphi iiasethi ii-FCA ezilawulwa ngabarhwebi zikuvumela ukuba urhwebe?
Abanye abarhwebi abalawulwa yi-FCA banokujolisa kwinani elithile lempahla, ngelixa abanye benikezela ngayo yonke into. Siqokelele uluhlu lwezona asethi zithengiswayo.
Yabelana ngeNtsebenzo kunye neZitokhwe
Amaqokobhe enathi, isabelo sokujongana yindlela yokuba uthenge kwaye uthengise izabelo kwiinkampani, e-UK nakwamanye amazwe. Ibhidi / cela sasaza Ekuthengiseni izitokhwe ngumahluko phakathi kwento umntu ayithengayo elungele ukuyihlawula, kwaye umntu othengisayo ukulungele ukwamkela ukuthengisa.
Ukuya kule marike, uyakwazi ukutyala imali kwiinkampani ezidweliswe eluntwini, kunye nokukwazi ukuthengisa izabelo ngeLondon Stock Exchange (LSE) kunye neNtengiso yoTyalo-mali engenye (i-AIM). Akunyanzelekanga ukuba uthenge isabelo esinye kwi-HSBC okanye kwi-AstraZeneca, umzekelo, njengoko ngamanye amaxesha ungathenga amaqhezu.
Kukho iindidi ezimbalwa zeCCA ezisebenzisana nabarhwebi ezibonwayo kwindawo.
Abarhwebi abaCebisayo: Olu hlobo lwezabelo olusebenzisana nomrhwebi lukunika iingcebiso malunga nokuba zeziphi izabelo ezinokuba zilungile ukuthenga okanye ukuthengisa. Nokuba uthatha isigqibo sokuthenga okanye ukuthengisa kuya kuba kuwe.
Abarhwebi abakhethiweyo: Kubarhwebi abathanda ukuthatha isihlalo sangasemva, umrhwebi onokubona uluncedo. Lo broker uthatha ulawulo olupheleleyo lokuthenga kunye nokuthengisa izigqibo ukuze ungazenzi. Yazi intlawulo yokujongana nezabelo ezinxulumene nolu hlobo lomrhwebi.
Abarhwebi bokwenza: Lo broker uqhuba ngokulula iiodolo ngokusekwe kumyalelo wakho, kwaye akaphazamisi konke konke.
ILondon Stock Exchange inceda i-FCA elawula iarhente ngebhidi ehambelanayo kwaye ibuze amaxabiso. Eyokugqibela iya kuhlala iphezulu kunexabiso lokubhida, kwaye umahluko wenza 'ukusasazeka'. Le yintlawulo engathanga ngqo kune-FCA elawula iarhente yabarhwebi ngokubuyisela ukufikelela kwimakethi oyifunayo.
Isivumelwano somahluko (CFDs)
Olu hlobo lokuthengisa luyakwenza ukuba ukwazi ukuqikelela ukutshintsha kwexabiso lezixhobo ezininzi ezinje ngestokhwe, iimali, izinto zorhwebo kunye nezalathiso. Ukuba ucinga ukuba ixabiso lentengiso liza kunyuka 'ungathenga' okanye 'uhambe ixesha elide'. Ukuba kwelinye icala, uyakholelwa ukuba intengiso izokwehla, 'ungathengisa' okanye 'ufutshane'.
Ngee-CFDs, abarhwebi akufuneki babenempahla engaphantsi. Ngokuchasene noko, i-CFD yenza ukuba ulandele ixabiso lenkampani, kunye nexesha langempela. Ngenxa yoko, uyakwazi ukwenza inzuzo ngamaxabiso atshintshayo ngokuhamba 'mfutshane' okanye 'ubude', kwaye rhoqo ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini. Ii-CFDs zivumela nabarhwebi ukuba bafikelele kumaziko abonelelweyo.
Masithi iAmazon ixabiso nge $ 3,001 kwi-NASDAQ
Utya imali eyi- $ 500 kwi-oda yokuthenga- oko kuthetha ukuba ucinga ukuba izitokhwe zeAmazon ziya kunyuka
Kwiintsuku kamva, amaxabiso esitokhwe seAmazon yi-10% ephezulu kwi-NASDAQ
Oku kuthetha ukuba ixabiso le- £ 500 CFD yakho lenyuke nge-10%
Uvala isikhundla, wenze inzuzo eyi- $ 50 apha endleleni
Ngokubalulekileyo, ubukwazile ukurhweba kunye nenzuzo kwizitokhwe zeAmazon ngeCFDs- oko kuthetha ukuba bekungafuneki ukuba uthathe ubunini.
Njengomrhwebi, kuya kufuneka uqikelele ngokuchanekileyo amaxabiso okutshintsha kwee-indices, ukuze wenze inzuzo. Unokuthengisa ii-indices ezininzi okanye ugxile kwisalathiso esinye. Awunakho ukuthenga isalathiso njengoko unakho ngestokhwe. Izalathiso zizalathiso zentshukumo edityanisiweyo yeeasethi ezininzi.
Ezi zalathiso zilinganiswa ngokwamanqaku, kwaye zihamba njalo. I-indices abatyali-mali abakwazi ukuthengisa ngokuthe ngqo isalathiso kwaye kufuneka benze njalo nge-ETFs, ikamva okanye iiCFD. Ngale ndlela, abatyali mali banokuqikelela ukutshintsha kwee-indices ngaphandle kwesidingo sokuthenga iiasethi ezizodwa. Isalathiso ngasinye kunye nesinye sibala ixabiso ngendlela yaso.
Le marike iqhuba i-24/7, ke ithathwa ngokuba bhetyebhetye kubarhwebi abanokungabi nalo ixesha lokurhweba ngokutshintshiselana ngesitokhwe. Kukho abatyali mali abaphumeleleyo abathengisa kuphela izinto zorhwebo. Kule marike, kukho 'izinto zorhwebo ezilukhuni' kunye 'nezinto zorhwebo ezithambileyo'.
Izinto 'ezithambileyo' zibandakanya:
Umbona, umqhaphu, iCanola, irhasi, ioats, irayisi
Iswekile, iCocoa, ikofu, iJusi yeOrange
Iinkomo eziPhila, iihagu zeBhayi
Oku kulandelayo kuthathwa njengempahla enzima:
Igolide, iCopper, iSilivere, iAluminiyam
I-oli ekrwada, iRhasi yeNdalo, Ukufudumeza, Ipetroli engenasixhobo
Inkokheli, iNickel, iPlatinam, iPalladium, iTin, iZinc
Ngaphambi kokurhweba nolu hlobo oluthile lweasethi kubalulekile ukuba uyiqonde indlela esebenza ngayo intengiso yobomi bokwenyani. Ukurhweba ngezixhobo kunokwandisa ipotifoliyo yakho kwaye kunciphise umngcipheko.
Bambalwa kakhulu abantu abangakhange beve ngeemali zokubala. Ukuthengisa i-cryptocurrency, abathengisi kufuneka baqikelele ukunyuka nokuhla kwexabiso lemali. Konke ngaphandle kokufuna ukuba 'ngumnini' wezemali ezingaphantsi. Ukuba imeko kukuba ufuna ukuba ngumnini weengqekembe zemali ezisisiseko, kuyakufuneka urhwebe nge-CFA elawulayo ye-CFD broker.
I-cryptocurrency enye uninzi lwabantu oluva ngayo yiBitcoin, nangona kunjalo, kukho abanye ekufuneka beyiqaphele kwaye:
Kuluvo olulungileyo ukuya kuthenga nasekuthengiseni ii-cryptocurrensets kwiakhawunti yedemo yomthengisi ye-FCA. Ngokwenza njalo, ungazivavanya izicwangciso zorhwebo yindawo eyi-100% engenabungozi.
Xa umrhwebi efuna ukurhweba ngezezimali zangaphandle, bajikela kwi-FCA forex broker ukubeka iodolo. Oku kwenza ukuba uthengise okanye uthenge iiperi zemali ezifana ne-GBP / USD. Indawo yemarike ye-forex yemveli iqhuba iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezi-5 ngeveki. Nangona kunjalo, abanye abarhwebi abalawulwa yi-FCE bayakuvumela ukuba urhwebe ngempelaveki, nayo. Oku kwaziwa ngokuba 'kukuthengisa iiyure'.
Izibini ze Forex ziwela kwiindidi ezi-3; ubukhulu, abantwana, kunye ne-exotics.
Izibini eziphambili zezona zilulwelo kakhulu kwaye zifunwa, ezinje nge-EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD - ukubala ezimbalwa. Ezi zibini zinokusasazeka okuphantsi kwaye zinokurhweba ixesha elininzi.
Xa kuziwa kubantwana, bahlala bebizwa ngokuba yimali enqamlezileyo kwaye bangaze babandakanye iDola yaseMelika. Imizekelo ibandakanya i-GBP / JPY, i-EUR / GBP, i-CHF / i-JPY.
Izibini ezingaqhelekanga zihlala zisasazeka ngaphezulu. Kungenxa yokuba azithengiswa rhoqo. Izibini ezingaqhelekanga zibandakanya i-EUR / TRY, i-USD / HKD, i-GBP / i-ZAR.
Kulungile ukuba ukhethe iqonga ngezinto ezahlukeneyo zemfundo, kunye neetshathi zexabiso ezifundisayo kunye nophando lwemarike. Ukuba ungumqali xa kuziwa kwimarike ye-forex ke i-eToro liqonga elihle lokuqwalasela.
Ungabafumana njani abarhwebi abahamba phambili beCAA?
Okokuqala nokuphambili kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho ulawulwa ngokupheleleyo kwaye usemthethweni. Njengoko sicacisile gca, ukufumana umthengisi olawulwa yi-FCA kubaluleke kakhulu njengoko umzimba ukho ukukhusela njengomtyali mali.
Ngokuzibophelela kwiqonga elisebenza ngaphakathi komthetho wase-UK, udala umnatha wokhuseleko kwindawo ekuhlalwa kuyo ziinkampani ezininzi zobuqhetseba. Ukukhanya koku, senze uluhlu lwezinto eziqwalaselweyo xa sikhangela abarhwebi abanxulumene neCAA kwi2021.
Ngaphambi kokuba uthathe i-plunge, kubalulekile ukuba wazi ukuba yeyiphi na impahla oya kuyinikwa. Emva kwayo yonke loo nto, unokufuna nje ukurhweba nge-forex ngoku, kodwa kamva ezantsi emgceni, unokuthatha isigqibo sokunxibelelana nezinye iiasethi.
Ukuba yi-forex unomdla kurhwebo emva koko kubalulekile ukuba uphonononge iminikelo yesiza. Umzekelo, abanye abathengisi bagxila kwizibini nje ezimbalwa, ngelixa abanye benokunika i-monty epheleleyo-enje ngee-majors, abantwana kunye ne-exotic.
Ngesi sizathu, kulungile ukufumana i-FCA elawulwayo i-broker enika uluhlu lweeklasi zeeasethi. Ngale ndlela, unazo zonke iimfuno zakho zomrhwebi phantsi kophahla olunye. Ukuba ufuna ukongeza kwipotifoliyo yakho kamva, oku kuyakusindisa kwinkqubo yokufumana elinye iqonga lomthengisi.
IKhomishini kunye neMirhumo
Umrhwebi ngamnye uhlukile xa kufikwa kwimirhumo. Kukho amaqonga angabizi abarhwebi umrhumo wekhomishini kwaphela. Kukho abanye ababiza ipesenti emiselweyo kurhwebo ngalunye.
Amathuba kukuba kunye nomthengisi weFCA owaziwayo, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yorhwebo. Oku kuhlala kuyinto engafaniyo kurhwebo ngalunye.
Njengokuba; masithi uthengisa ngerandi.
Umrhwebi wakho uhlawulisa i-0.2% kwiikhomishini
Ufaka i- £ 1,000 kwi-GBP / USD
Uya kuhlawula i-broker firm £ 2 kwimirhumo yolu shishino.
Iindaba ezimnandi kuwe kukuba uninzi lwabarhwebi abalawulwa yi-FCA abadweliswe kweli phepha likuvumela ukuba uthengise ngaphandle kokuhlawula nepeni enye kwikhomishini. Endaweni yokuba, yonke imirhumo yakhelwe ukusasazeka!
Ihlala ihoywa, kodwa ibaluleke kakhulu-inkxaso yabathengi yinxalenye enkulu yokukhetha umthengisi ofanelekileyo kuwe. Igama eliphambili apha inkxaso. Ngokufanelekileyo, ufuna iqonga lomthengisi elinikezela ngenkxaso kubathengi bayo iiyure ezingama-24 ngosuku, kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki. Ngexesha lakho lokufuna, ufuna ukwazi ukuba umthengisi wakho uya kubakho ukunceda.
Abona bathengisi babalaseleyo be-FCA babonelela ngeendlela ezininzi zokuxhasa abathengi ezinje ngengxoxo ebukhoma, i-imeyile, umnxeba kunye nefom yoqhakamshelwano. Ukuba nomthengisi naye ohlala kwimidiya yoluntu yindlela entle yokubona iindaba zamva nje, kunye nokunxibelelana nabanye abathengisi.
Inkqubo yeDiphozithi kunye nokuRhoxa
Okokuqala, ukuba unendlela ethile yokuhlawula onqwenela ukuyisebenzisa, kuya kufuneka uphande ukuba loluphi ukhetho lwakho eqongeni ngaphambi kokuba uqhubeke.
Xa kufikwa kumaxesha okuqhubekeka-ngokuchanekileyo ufuna umthengisi onokuqhubekeka nedipozithi yakho kwangoko.. Ewe kunjalo, oku kuxhomekeke kubarhwebi abathile, kunye nendlela oyikhethayo yokuhlawula. Ukuba ufuna ukufaka imali kwaye uqale ukurhweba kwangoko emva koko ukhetho olufana ne-e-wallets kunye ne-debit / amakhadi etyala zihlala zikhawuleza ukuqhubekeka.
'Ukusasazeka' yenye yeetriki ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha umrhwebi. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthengisa kunye nexabiso lokuthenga leasethi (inani le iipipi).
Ukusasazeka kwenza umahluko kwinzuzo onokuma kuyo. Umzekelo, ukuba ukusasazeka kwe-EUR / USD yayiziipipi ezi-4, utyalomali lwakho kuya kufuneka lonyuse okungenani iipips ze-4 ukuze uzophule.
Kukho izixhobo ezimbalwa zokurhweba ezithathwa njengezingenaxabiso kubarhwebi bayo nayiphi na imeko. Ezi zinto zinokukunceda ekuhlalutyeni iimarike.
Kananjalo, sidibanise uluhlu olukhawulezayo lwezixhobo zemfundo kunye nezorhwebo ezibonwayo kwi-FCA.
Iinkcukacha eziBukhoma kunye nezeMbali: Ngokubanzi, eli nqaku lixelela abarhwebi ngalo naluphi na utshintsho lwamaxabiso kwiimarike. Ikwayinto ebalulekileyo xa usenza uvavanyo lwasemva kwexesha, uhlalutyo lobuchwephesha kunye neendlela zokutyala imali.
Iitshathi kunye nezalathi: Imvakalelo yentengiso ihlala iboniswa ngokusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha kunye neetshathi.
Ukurhweba ngokuzenzekelayo: Ayisiyo yonke indebe yomrhwebi yeti, kodwa abanye abathengisi baxhasa iinkqubo zorhwebo ezenzekelayo, umzekelo, i Umcebisi ngeengcali.
UMgaqo woPhumezo loMyalelo: Ezona ndawo zingcono zabarhwebi ziya kuyenza i-odolo yakho kwimizuzwana, nditsho iimillisecond. Oku kuxhomekeke kuhlobo lwesicwangciso sokurhweba esisetyenzisiweyo (okt esizenzekelayo) kunye novakalelo lwamaxabiso.
Izikhombisi zobuchwephesha eziboniswe kumaqonga amaxabiso akumgangatho ophezulu zibandakanya:
Ukuhambelana kweQonga lokuZimeleyo
Amaqonga orhwebo lomntu wesithathu asetyenziswa ngabatyali mali ukulawula nokubona iipotifoliyo zabo, kunye nokubeka urhwebo ngaphezulu komrhwebi omnye ngexesha. Ukuba unomdla wokusebenzisa iqonga elizimeleyo, kuya kufuneka usoloko ujonga ukuba ngawaphi amaqonga axhaswa ngumrhwebi wakho, ukuba akhona.
Ukuza kuthi ga ngoku lelona qonga lokuthengisa ithandwayo MT4. Isoftware yomntu wesithathu iyahambelana neninzi labarhwebi abalawulwa yi-FCA. Ngaphezulu kokunikezela iimfumba zesalathiso sobuchwephesha kunye nezixhobo zokuzoba itshathi, iMT4 ikwavumela ukuba ufake iirobhothi ezizenzekelayo.
Nokuba unamava kwaye unesicwangciso esithile sokurhweba engqondweni, okanye zintsha kwaye zivulelekile kukhetho- yenza inqaku lokufunda ukuba zeziphi iiakhawunti ezikhoyo.
Abanye abarhwebi abalawulwa yi-FCA kwi-Intanethi banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zeakhawunti ezinje nge nano (0.001), micro (0.01), mini (0.10), kunye neeakhawunti eziqhelekileyo (1.00). Nangona unomdla kwiiakhawunti ezincinci, umzekelo, abathengisi abaninzi abazibhengezi ezi akhawunti kodwa baya kukuxhasa ekuthengiseni izixa ezincinci.
Kubalandeli bokholo lwamaSilamsi, abanye abarhwebi abalawulwa yi-FCA banikezela ngeAkhawunti yamaSilamsi. Ezi akhawunti ziye zahlengahlengiswa ukuze zilandele iSharia Law, apho ukuhlawula okanye ukufumana inzala kungavunyelwe ngokungqongqo. Ngenxa yoko, abatyali mali abasebenzisa iAkhawunti yamaSilamsi abayihlawuli inzala kwaphela. Ukuba ufuna olu hlobo lweakhawunti kufanelekile ukuba ubuze umthengisi we-FCA embuzweni ukuze abone ukuba angazamelana neemfuno zeakhawunti yakho.
Qalisa nge-FCA e-Broker elawulwayo namhlanje
Ngoku uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga nabarhwebi abalawulwa yi-FCA, kuya kufuneka ulungele ukuqala. Ukuba, nangona kunjalo, awukafumani i-FCA broker oziva uzithembile kuyo, emva koko ungakhathazeki. Ungajonga abarhwebi bethu abalawulwayo abalawulwa yi-FCA ngaphezulu kweli phepha.
Kulabo bakulungeleyo ukuqala ukurhweba, nceda uphonononge yethu 5 inyathelo lokubhalisa isikhokelo apha ngezantsi. Oku kuya kukunceda ukuba uqale ngokurhweba nge-FCA broker namhlanje.
Okokuqala, kufuneka uye kwiwebhusayithi ye-FCA ekhethiweyo yomthengisi. Okulandelayo, kuyakufuneka ufumane iphepha 'lokubhalisa' kwaye ufake idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha elikhethekileyo ukuze ubhalisele iakhawunti yakho entsha.
Phambi kokuba uqhubele phambili nakuphi na ukuqhubekeka, umrhwebi wakho omkhethileyo uya kufuna ukuqinisekisa ubungqina bakho. Ngokwe-KYC nganye (yazi umthengi / umthengi) wakho imigaqo-Abarhwebi be-FCA kulindeleke ngokusemthethweni ukuba bacele ulwazi malunga nawe. Oku kubandakanya imeko yakho yezemali, imbali yakho yorhwebo / ulwazi, unyamezelo lomngcipheko kwaye kunjalo, nesazisi sakho.
Ngenxa yoko kuya kufuneka unikeze ikopi yencwadana yakho yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba, kunye nemali eyilwayo yaseburhulumenteni kwezi nyanga zintathu zidlulileyo (ukubonakalisa ngakumbi ukuba ungubani). Uya kudinga ukufaka inombolo yakho yeinshurensi yelizwe kwaye ufake ungeniso lwakho lwenyanga kunye nento encinci malunga nokuba ungubani njengomrhwebi.
Ngokukhawuleza ukuba isazisi sakho siqinisekisiwe (sihlala sikhona kwangoko) kwaye umthengisi ekuthumelele i-imeyile iinkcukacha zakho zobhaliso, ungabuyela eqongeni wenze idiphozithi.
Iindlela zokuhlawula zinokubandakanya:
Ityala / ikhadi lamatyala
E-isipaji ezifana Skrill, PayPal kunye Neteller
Iqonga ngalinye lomthengisi lahlukile, ke kuyakufuneka ujonge ukhetho olukhoyo. Ikwangumbono olungileyo ukuqaphela ukuba yeyiphi impembelelo indlela yakho yokuhlawula eya kuba nayo ngexesha elithathayo ukufikelela kwiakhawunti yakho yorhwebo. Umzekelo, ukuhanjiswa kweengcingo zebhanki kuyaziwa ngokuba yenye yeendlela zokuhlawula kancinci. Ngalo lonke ixesha jonga itafile yentlawulo yayo nayiphi na intengiso ngaphambi kokuba uzibophelele kwiakhawunti.
Kucetyiswa ngamandla ukuba uqale ngeakhawunti yeedemo, njengoko oku kukwenza ukuba uzive kakuhle eqongeni ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa imali yakho.
Endaweni yoko, uya kunikwa 'imali yephepha' ukuba urhwebe nayo, kwiimeko zentengiso yokwenyani. Nokuba kubathengisi abanamava, ukusebenzisa indawo yeakhawunti yeedemo yindlela elungileyo yokuzama iindlela ezahlukeneyo. Kwi-newbies, oku kuyakuvumela ukuba uqhelane nokulandela umkhondo wokuhamba kwamaxabiso kunye nokwenza uhlalutyo lobuchwephesha.
Yeyiphi eyona Broker ilungileyo yeFCA yowama-2021?
Sigubungele iimetrikhi ukuba sijonge, kunye neeasethi zokurhweba- ke ngoku, kuya kufuneka uxhobile ngayo yonke into oyifunayo. Ngokumalunga nokufumana elona qonga libalaseleyo kwiinjongo zakho zorhwebo-ngezantsi uzakufumana ukhetho lwabarhwebi bethu abalawulwa li-FCA abalahlekileyo.
I-Etoro.com - iKomishoni yeZero ehlawulwayo
Ukuba ungumntu oqalayo xa kuziwa ekurhwebeni, i-Etoro.com inokuba ngumthengisi owufunayo. Ungaqalisa nge-50 USD encinci kwaye unokurhweba ngeziteki ezincinci (cinga i-mini kunye ne-micro-lots). Eli qonga alihlawulisi nayiphi na ikhomishini kwaye libonelela ngokusasazeka okuphantsi kakhulu kwii-CFD.
I-Etoro.com ibonelela ngokufikelela kwiimarike zesitokhwe ezahlukeneyo njengeLSE, NASDAQ, NYSE, TSE, kunye ne-SSE. Lo mrhwebi weFCA unikezela ngembuyekezo ngokweekepusi ze-ESMA kwaye wamkela ukudluliselwa kwebhanki ngocingo, idebhithi/amakhadi okuthenga ngetyala kunye ne-e-wallets efana neSkrill, iNETELLER, iKlarna kunye nePayPal.
Ubuncinci bediphozithi nje ngama-50 USD
Ukusasazeka ngokuqinileyo kunye neekomishini zero
Zonke iiakhawunti zokurhweba nge-eToro zikwi-USD
Ndwendwela Etoro.com Ngoku
Kukho iimfumba zeenkampani zabarhwebi ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeenkonzo zorhwebo, ke ukwazi ukuba ngubani omthembileyo onokuba lusuku olubi. Ngale nto engqondweni, ukukhetha umrhwebi olawulwa yi-FCA ayisiyongqondo. Inqanaba lokhuseleko elinikezelwa ngala maqonga linika abathengisi ukhuseleko ngokuchasene nokusebenza gwenxa kwebroker kwaye kuqinisekisa ukuba imali yakho ikhuselwe.
Ngenxa yoko, kuya kufuneka ujonge ngaphandle okanye ungcono kubarhwebi abalawulwa yi-FCA abadweliswe apha ngasentla. Ukuba uthatha isigqibo sokubhalisela umrhwebi ongadweliswanga kweli phepha, kuhlala kubalulekile ukwenza owakho umsebenzi wesikolo. Oku kuya kubandakanya ukubonwa kweqonga, inqanaba lekhomishini, ukusasazeka kunye nemali yokufaka / yokurhoxisa.
Ukuba ucwangcisa ukurhweba ngemali encinci, emva koko ukhetha umrhwebi oneefizi eziphezulu zeeflethi akunakulungela wena ekuhambeni kwexesha. Elinye icandelo leengcebiso kukusebenzisa uninzi lweeakhawunti zeedemo. Zixabiseke ngokwenene xa kusiziwa ekuqhelaneni neqonga kwaye ekugqibeleni-ekufundeni ukuba ngumrhwebi ongcono.
Ngaba ndingayifaka iakhawunti yam yomthengisi weFCA ndisebenzisa itsheki?
Umrhwebi ngamnye we-FCA wahlukile malunga noku. Nangona amanye amaqonga eyamkela itsheki, abanye banokuthatha kuphela amakhadi etyala / amakhadi etyala, ii-e-wallets okanye ii-cryptocurrensets. Soloko ujonga kumthengisi obuzwayo.
Ngaba kuya kufuneka ndibonelele nge-ID kumthengisi weFCA
Ewe. ngokwemithetho yokuchasana nemali ngokungekho semthethweni, nawuphi na umrhwebi weFCA kufuneka athobele ulindelo lweKYC. Ngenxa yoko, kufuneka bachonge umntu ngamnye ngaphambi kokuba ababhalise.
Kwenzeka ntoni ukuba umthengisi wam weCAA angene ekucinyweni?
Kuba umrhwebi wakho ulawulwa yi-FCA, ukhuselwe yimali eyahlukileyo egcina imali yakho yahlukile kuleyo ye-broker firm. Imali yakho kufuneka ikhuselwe ukuya kuthi ga kwi-85,000 ye-FSCS, kodwa jonga oku kunye nomthengisi wakho ukuze uqiniseke.
Ndingasebenzisa ubungakanani obungakanani kumthengisi weFCA?
Kuxhomekeka kwiasethi ofuna ukuyithengisa. Kukho iminqwazi yokunyusa ebekwe yi-ESMA kwabo base-UK nase-EU. Umzekelo woku kukuphakanyiswa kwemali yedijithali, ebhalwe ngo-1: 2
Yintoni umthengisi weFCA?
I-FCA imele 'iGunya lokuZiphatha kwezeMali'. Eli qumrhu lilawulayo linoxanduva lokulawula nokuphicotha bonke abarhwebi base-UK ukuqinisekisa intengiso yemali efanelekileyo kubo bonke.